Booqashada Cabdiweli ee ‘koofur galbeed’ | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Booqashada Cabdiweli ee ‘koofur galbeed’
Booqashada Cabdiweli ee ‘koofur galbeed’
Ra’iisulwasaaraha dawladda dhexe ee Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal hawleed kusoo kala bixiyay gobollada Baay iyo Bakool, halkaasoo inta badan ciidamadda isbaheysigu ay dhawaan ka saareen Al-shabaab.
Socdaalkaasi ra’iisulwasaaraha waxaa ku wehlinayey wasiiraddiisa difaaca, ganacsiga, hiddaha iyo tacliinta sare iyo sidoo kale taliyeyaal ciidan waxayna ugu horreyn booqdeen magaalada Baydhabo, iyaga oo qaabilaad heer sare ahayd kala kulmay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda, maammulka iyo saraakiisha ciidamadda huwanta ee ku sugan gudaha gobolkaasi Baay.
Sida ay wararka ku heshay Xaqiiqa Times kulan ay wada yeesheen wefdiga booqashada ku jira ee ra’iisulwasaaraha iyo madaxda gobolkaasi ayaa looga wada hadlay sii xoojinta hawlgalka ‘Badweynta Hindiya’ iyo xaqiijinta arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada deeggaamada laga qabsaday xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Sidoo kale, ra’iisulwasaare Cabdiweli ayaa la kulmay guddoomiyaha barlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xildhibaanada Baydhabo u jooga hawlaha dib u heshiisiinta iyo dhamaystirka maammul u sameynta gobollada koofur galbeed, kuwaasoo uu ra’iisulwasaaruhu boggaadiyay sida habsamida leh ee ay u socdaan imminka.
Dhinaca kale, Cabdiweli Sheekh ayaa markii ugu horreysay booqday degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool wuxuuna balanqaaday in xukuumaddu ay halkaasi geyn doonto ciidamo isugu jira boolis iyo nabadsugid si ay gacan uga geystaan amniga iyo xasilloonida degmadaasi.
Inkastoo, ra’iisulwasaaruhu soo gebaggebeeyey booqashadiisa ayaa haddana safarkaasi lagu soo beegay xilli ay Baydhabo kusii qulqulayaan ergada ka qeybgalaysa dhismaha dawlad gobolleedka koofur galbeed oo lagu saxiixay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Previous articleDawladda: ururka Al-shabaab ha isi soo dhiibeen?
Next articleSoomaaliya: nolosha ama geerida Godane?